Germany: Wasiir is-dilay markii Coronavirus uu burburiyey dhaqaalaha
By WARIYAHA BERLIN , GAROWE ONLINE
Maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ku howlanaa xal u helista saameynta shaqaalaha iyo shirkadaha kasoo gaartey fayruska.
BERLIN, Germany – Wasiirka Maaliyada ismaamul goboleedka Hesse ee waddanka Jarmalka ayaa is-dilay kadib markii uu "si qoto dheer uga murugooday" qaabka uu u xalin doono saameynta dhaqaale ee ka dhalatay Coronavirus.
Thomas Schaefer ayaa Sabtidii waxaa meydkiisa laga helay agagaarka wado tareen, sidda uu sheegay Volker Bouffier, hogaamiyaha gobolkaas.
Dacwad-oogeyaasha magaalada Wiesbaden ayaa xusay in ay rumeysan yihiin in mas'uulka uu isagu is-dilay, wallow aysan sharaxin qaabka.
"Aad baan uga naxnay, waanu aamin-la'nahay, dhamaanteena waxay nala noqoto anfariir," ayuu Bouffier ku yiri war-saxaafadeed muuqaal ah.
Bileyska iyo xeer-ilaalinta ayaa si wadajir ah u sheegay in xaqiiqooyin, ay kamid yihiin wareysiyo lala yeeshay goobjoogeyaal iyo baaritaan ay goobta iku sameyeen, ay u soo baxday in Schaefer uu is-dilay.
Hesse waxaa ku taala caasimada dhaqaalaha Germany ee Frankfurt. Si lamid ah, waxay fariisin u tahay bangiyo waawey oo uu ku jiro Bangiga Dhexe ee Midowga Yurub, Deutsche Bank iyo Commerzbank.
Mr Schaefer oo toban sano ahaa Wasiirka Maaliyadda maamulka Hesse ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa siddii uu ula tacaali lahaa saameynta shirkadaha iyo shaqaalaha kasoo gaartay fayruska.
Siyaasiyiinta gobolka ayaa u arkayey in uu noqon karo bedelka Volker Bouffier, hogaamiyaha waqti xaadirkaan ee dowlad goboleedkaas.
Labadooda waxay xulafo dhow oo dhanka siyaasada ay la ahaayeen Angel Markeyl, hogaamiyaha Jarmalka, oo dhankeeda karan-tiil ku jirta.
Sikastaba ha ahaatee, Thomas Schaefer, oo lagu tilmaamay qof aad loo xormeeyo, ayaa ifka kaga tegay hal xaas iyo laba caruur, kuwaas oo la filayo in ay noloshooda inta ka dhiman damaanad qaado dowlada dhexe ee Jarmalka.
Wasiir sanka ka jabay markii madax-madax uga soo dhacay masraxa
Caalamka 29.10.2019. 23:00
Mas'uulkan ayaa ku kufay jaran-jarada xili uu kasoo degayay masraxa kadib markii uu dhameystay hadal-jeedintiisa shir caalami ah.
Diyaarad uu leeyahay ciidanka cirka Mareykanka oo burburtay
Caalamka 08.10.2019. 19:16
Kalmadda "InshaAllah" oo lagu daray qaamuuska Jarmalka
Caalamka 06.01.2020. 15:57
Mareykanka oo diidey in sirdoonkiisa lala barbardhigo midka China
Caalamka 27.11.2019. 10:34
Dalka Jarmalka oo joojinaya tababarka uu siiyo ciidamada Soomaaliya
Soomaliya 03.02.2018. 00:34